Umsebenzi oyinhloko we-airbag - esheshayo isikhathi kungenzeka ukubambezela umuntu futhi ukuvimbela it kusuka ukushaya zemishini. Naphezu kweqiniso lokuthi wesenzo livela elula, onjiniyela abasebenza ekuthuthukiseni futhi manje. Le airbag enezinto eziningi izimo. Ngaphandle ukuhambisana, uma kwenzeka ingozi, it is hhayi kuphela ukulondoloza impilo yakho, kodwa futhi ngakolunye uhlangothi, kungaba kubi kakhulu isimo.
Ake sicabangele ngokuningiliziwe indlela airbag
Umgomo we operation isekelwe izingxenye ezintathu: komqamelo yakhiwa inayiloni Indwangu, ngobunono zahlanganiswa ngo amasondo ayo, ideshibhodi, iminyango kanye izihlalo; inzwa eletha isibonakaliso nokucupha; uhlelo, ukugcwalisa nge gas. Ngemva kokuthola lezi isignali ye ukushayisana, inzwa enza uhlelo ukuthi ihlangana potassium nitrate kanye sodium azide. I kwaphumela igesi ukuqhuma igcwalisa airbag. Umzuzwana nje, basuke eqolo kakhulu ke deflated ngesikhathi esisodwa, ukunika amandla abagibeli ukuhambisa. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile banayo ukuhlangabezana izimoto nge uhlelo efana airbag abahamba emgwaqweni. Kuyinto ngaphansi hood, phakathi kwaso phambi somoya. Ngo ukushayisana komhlaba ngezinyawo, isimiso esinjalo kakhulu kunciphisa ingozi yokulimala kabi.
Naphezu kweqiniso lokuthi injongo uhlelo - ukuvikela ukuphila komuntu, kungaba zigcwele izingozi kanye nesisindo. Ngokuvamile, kufanele kusolwe iqiniso lokuthi airbag akuyona wasebenza njengoba kufanele. Izinga lapho ikhishwe, kuziwa amakhilomitha ngehora 300. manje Umgomo we onjiniyela isibe ukwehla yayo, kodwa kumelwe sizame singalahlekelwa ukuphumelela imicamelo kakhulu. Isihlalo ibhande ngesikhathi ikhishwe ku ukushayisana kubamba ukunyakaza komzimba. Kulokhu, lo airbag ithambisa buhlungu, kancane ekunciphiseni ingozi yokulimala, okuyisimo esisongela ukuphila. Kodwa uma ungenayo idlule izinga nesivinini. You azi ukuthi abakhiqizi imoto bayatfutfuka uhlelo ukuphepha, usihlole ngesivinini mayelana 60 amakhilomitha ngehora kuhambisana nazo zonke izimfuneko. Yiqiniso, uma ushayela 160 km / h ithemba ngoba imicamelo kangcono hhayi. Uma ukuziba ibhande, impendulo uhlelo "ukudubula" kuwe ngomfutho omkhulu, futhi ngemiphumela engase sokuboniswa enjalo uyoba inhlekelele. Ungazami zinikeza amacebiso amaningi okudlula uhlelo, kokuba walibheca yibhande a ababambelela noma uxhume ku-sivala. Wena udlala ngomlilo, kusengozini kungukuphila impilo yakho. Manje, ezinye izimoto anemisila izinzwa ukuvimbela airbag uma nebhande lesihlalo semoto is hhayi esigaxe. Kodwa kulokhu, ithuba uthole ngempumelelo kuzo zomgwaqo lincishisiwe.
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi airbag kwabangela ezimweni lapho ayidingeki. Ngokwesibonelo, uma ngesikhathi isondo imoto ngesivinini esiphezulu iwela umgodi ojulile. Noma ewela hood zokuthile esindayo. Futhi ngisho nalapho 'gxuma' yonkana amathrekhi, kungaba kwambulwe. Kukhona ngokuphelele isimo okuphambene, lapho isikhwama somoya ukuthunyelwa. Ngokuvamile kuba isici yokukhiqiza, noma ukungasebenzi lobuchwepheshe kohlelo. Kakhulu ngokucophelela kubalulekile ubheke imishini ukuthi kakade bese kuba nengozi. Wena azigomekile ukukwazi ukusebenzisa emotweni, okuyinto wayaziwa njengomuntu ophansi umcamelo kabusha phama. Futhi ngokuvamile, ukuqinisekisa ukuthi namanje, akekho uzokunika.
Engemuva disc ukunqanda Vaz-2107: Ukufakwa
Uyini ibhasi ezinhle (ehlobo)? Isilinganiselwa amathayi ehlobo. Amanani, izithombe
Kanjani ukuqala imoto ebusika. Iseluleko esiwusizo sokuthi abashayeli
Izimfihlo amaphupho: lokho izinsuku iphupho kuyagcwaliseka
Whipworm womuntu: izimpawu, ukwelashwa, izimbangela
Imeya Pelekas Monastery 5 * (neCorfu / Pelekas, Greece) izithombe kanye nokubuyekeza
Fucidinum (ukhilimu). imfundo
Belearskie Islands (Islas Baleares) - I Cent ngobukhulu Mediterranean ukuvakasha
Lapho ukutshala umquba oluhlaza for engadini? Kuhle umquba oluhlaza for engadini